कोरोना भाइरसबारे अझै हामीलाई थाहा नभएका यी ३ कुरा ! – AB Sansar
कोरोना भाइरसबारे अझै हामीलाई थाहा नभएका यी ३ कुरा !
October 15, 2020 adminLeaveaComment on कोरोना भाइरसबारे अझै हामीलाई थाहा नभएका यी ३ कुरा !
बिबिसी। धेरै समय भइसकेको जस्तो लागे पनि कोरोनाभाइरसबारे चर्चा हुन थालेको गत डिसेम्बर महिनादेखि हो। वैज्ञानिकहरूले धेरै प्रयत्न गरिरहेको भए पनि हामीले कोरोनाभाइरसबारे अझै धेरै बुझ्न बाँकी नै छ। त्यो भाइरससम्बन्धी अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर खोज्न विश्वभरि भइरहेका परीक्षणमा हामी पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहभागी भइरहेका छौँ। तीमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यी हुन्। ****AB- सन्सार *****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस ***, ***
यो सबैभन्दा आधारभूत प्रश्नमध्ये एउटा हो। तर यो निकै महत्त्वपूर्ण पनि छ। विश्वभरि लाखौँ मानिस कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। तथ्याङ्कमा देखिने वा पुष्टि भएका मानिसको सङ्ख्याले वास्तविक सङ्क्रमणको प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यो सङ्ख्या अझै अपूर्ण किन छ भने सङ्क्रमण भएका कैयौँ मानिस बिरामी नै पर्दैनन्। मानव शरीरमा हुने एन्टीबडीको परीक्षण गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सके कसैमा भाइरस भए नभएको जाँच गर्न सकिन्छ। त्यसपछि मात्र कति छिटो र कति परसम्म यो भाइरस फैलिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ।
२. यो कति घा’तक छ
ज्वरो आउनु र सुक्खा खोकी लाग्नु कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका मुख्य लक्षण हुन्। तपाईँ यी लक्षणबारे सतर्क हुनुपर्छ। केही बिरामीमा घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने र पखाला लाग्ने गरेको पनि पाइएको छ। केही बिरामीमा सुँघ्ने लिने क्षमतामा कमी आएको पनि पाइएको छ। विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार केही मानिसहरूलाई सङ्क्रमण भइसके पनि उनीहरूमा कुनै लक्षण देखिँदैन। उनीहरूले यो भाइरस बोकिरहेका हुन सक्छन् जो अरू मानिसमा सजिलै फैलिन सक्छ।-बिबिसी
भारी वर्षाका कारण मुम्बई – पुणे जलमग्न
बाँकेमा बाढी र डुबानबाट हुने जोखिम कम गर्न पूर्वतयारीl
July 21, 2021 santosh
सिडियो भन्छन्, ‘काठमाडौमा अब निषेधाज्ञा खोल्ने होइन अब बनाउने बेला भयो’l